Beginner တွေစတော့အိတ်စျေးသိကောင်းစရာများ | စတော့အိတ်စျေးသိကောင်းစရာများ 2019 ထဲက Find - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
စက်တင်ဘာလ 15, 2017
Investing အပေါ် Daily သတင်းစာ updated ဆောင်းပါးများ, စတော့ရှယ်ယာများ, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ!
တစ်ဦးအစပြုသူစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလပ်, စာအုပ်တွေ, အွန်လိုင်းအကြံပေးချက်များနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများမှအကြံပေးချက်ကိုအဘယ်သူမျှမပြတ်လပ်မှုလည်းမရှိ။ သို့သော်သင်သည် (သင်ဆိုးတစျခုပါဝင်သည်လျှင်သို့မဟုတ်သုံးခု) သင်မှမရရှိနိုင်နှစ်ခုရွေးချယ်မှုသာတကယ်ရှိပါတယ်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ကစားခြင်းတစ်ဦးအစပြုသူများမှာပါ။
သင်သည်သင်၏အသစ်ကကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အဲဒီအကြောင်းဖတ်တက်လေ့လာနေအသုံးပြုပုံသင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးကောင်းသောပွဲစားရတဲ့အားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာ - စီးပွားရေးအတွေး၏သင်ယူခြင်းအများကြီးလည်းပါဝင်သည်, သို့မဟုတ်သင်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များမပါဘဲသို့ငုပ်ခြင်းနှင့် Cream ရနိုငျသော။ အဘယ်သူမျှမကသူတို့အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကသူတို့ကိုပိုက်ဆံအများကြီးဆုံးရှုံးသွားမှုလိုသည်။
အဆိုပါပြဿနာအဖြစ်မကြာမီသင်သည်သင်၏အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုသင်လက်တွေ့အကွံဉာဏျဖွငျ့တရစပ်လိမ့်မည် start အဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျသငျစာအုပ်ဝယ်ဖို့လျှင်သင်ဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်, သင်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်လက်တွေ့ကျကျအခမဲ့အန္တာရာယ်လျင်မြန်စွာချမ်းသာလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအမှိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုမည်သူမဆိုတခြားရဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထက်မပိုလုံခြုံသည် ဖြစ်. , လူတိုင်းကိုထိမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်ဆဲကြီးမားတဲ့ငုပ်ယူခဲ့သူအနည်းဆုံးလူတစ်ဦးသိတယ်။ အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ဖြစ်ပျက်ဖို့လိုလားပေမယ့်သင်ရုံစတင်ဖွင့်နေသောကြောင့်သင်ရုံအခြားမည်သူမဆိုထံမှမျှကွဲပြားခြားနားသောပါပဲ။ တစ်ဦး sucker ဖြစ်မနေပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုဘဏ္ဍာရေးပျက်စီးခြင်းရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြမသွားပါစေပါနဲ့။
သူတို့ကပိုဝါရင့်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာကြုံတွေ့ဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်လူမျိုး၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူထိတွေ့၌သငျထားနိုငျသောကွောငျ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလပ်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်တစ်ခုအစပြုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအချို့သောအကူအညီနဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သူတို့ပြီးသားသိသောအရာတို့ကို၎င်းထံမှအကျိုးခံစားရဖို့ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်, သင်လိုအပ်သည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲများလည်းသင့်ရဲ့အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်, ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်မရှိဘဲဥစ္စာဓနလည်းမရှိမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာမကြာခဏကဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာအန္တရာယ်မရှိဘဲစည်းစိမ်ကိုကတိပေးကြသည်, သို့သော်လုံးဝအတုအယောင်ဖြစ်ပါသည် - ဆိုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအန္တရာယ်ကပါဝင်ပတ်သက်, သင်၏အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏ riskiest တဦးဖြစ်တယ်, ဒါမှတ်မိ: အန္တရာယ်မရှိဘဲစည်းစိမ်ကိုကတိပေးထားသည့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကောင်းတဲ့လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါသည် နှင့်ရှောင်ရှားရပါမည်။ ဂန္သင့်ရဲ့စာအုပ်တွေကိုကပ်ပြီးတော့ဘောဂဗေဒလျှောက်ထားခြင်းနှင့်မကြာမီသင်တစ်ဦးလိုလားသူများကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲထိနျးခြုပျနှင့်စိတ်ကူးချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရန်သင့်အားကွာသယ်ဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆိုင်တွေမှာအားဖြင့်ဖွင့်မျောနေကြသည်အဖြစ်သင့်အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုအတိတ်ကာလတစ် quaint အိပ်မက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျကံကောင်းလျှင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယခုမူကားများအတွက်, အိပ်မက်ကိုစောင့်လျက်, လေ့လာနေစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အစုစုကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲစောင့်ရှောက်လော့။
Tags: အခြေခံစတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ, Beginner တွေစတော့အိတ်စျေးသိကောင်းစရာများ, အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်အကြံပြုချက်များ, အစပြုသူစတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အတွက်အစပြုသူအကြံပေးချက်များ, စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြံပေးချက်များ, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ပွဲစားအကြံပေးချက်များ, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အကြံပေးချက်များ 2019, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်, အစပြုသူအဘို့အစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြံပေးချက်များ, စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာအစပြုသူများအတွက်အကြံပြုချက်များ